Laamaha Amniga Dhuusamareeb oo Amar deg deg ah la siiyay - Awdinle Online
Laamaha Amniga Dhuusamareeb oo Amar deg deg ah la siiyay
Shirka amniga caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ayaa ka qabsoomay magaalada caasimadda ah ee Dhuusamareeb waxaana shir-gudoominayay madaxwayne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid iyada oo ay ka qaybgaleen taliyayaasha booliska nabadsugidda gudoomiyaha amniga caasimadda iyo saraakiil kale.
Shirkan ayaa lagu gorfeeyey sidii loo dardargalin lahaa amniga iyo xasiloonida caasimada galmudug ee dhuusamareeb.
Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenku waxaa uu awaamiir siiyay ciidamada kala duwan ee ka hawlagala caasimadda in askari dhar shacab xiran uusan qori ku dhexqaadan karin magaalada, iyo in askartu aanay samayn karin waxyaabo khalkhalgalinaya xasiloonida shacabka sida inay xabbadaha iska ridaan.
Shirkaan ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Guud ahaanba deegaanada galmudug uu ka socda hawlgallo iyo talaabooyin kala duwan oo lagu xaqiijinayo ammaanka iyo xasiloonida deegaanada Galmudug.
Previous articleKulan muqdisho uga socdo Midowga Musharixiinta
Next articleShacabka Mandera oo dalbaday in ciidamada Cabdirashiid Janan laga saaro deegaankooda